Iindaba - Ugqirha olungelelanisa amadolo
Ukusetyenziswa kwamadolo okubopha ngamathambo
Idolo lokudibanisa idolo luhlobo lwesixhobo sokukhusela izixhobo. Ukuthintela abaguli emva kotyando emadolweni ekubekeni udaka olunzima nolungangeni moya, aedolweniyenzelwe ngokukodwa izigulana emva kotyando oludibeneyo lwamadolo. I-Angle eguquguqukayo edolweni. I-brace support brace ikudidi lwezixhobo zokukhusela kwimo yesiqhelo.
Inkqubo ye- ihenjisi edolweni yenziwe ngelaphu elilungile, kwaye inkqubo yokulungiswa yenziwe nge-aluminium enobunzima bokukhanya, ibonisa ukukhanya kunye nezinto ezilula ezifanelekileyo kwizixhobo zokhuselo zonyango.
Uluhlu lwesicelo samadolo okulungiswa ngokudibeneyo:
1. Ukuvuselelwa emva kotyando lwedolo.
2.Ukuphinda usebenzise ukusetyenziswa emva kokulimala okanye emva kokusebenza kwemithambo yangaphakathi kunye necala kunye ne-anterior and posterior cruciate ligaments.
3. Ukulungiswa okanye ukuthintelwa kokuhamba emva kotyando lwe-meniscus
4. Ukukhululwa ngokudibeneyo kwedolo, uqhaqho lwesifo samathambo okanye utyando lokwaphuka.
5. Unyango olulondolozayo lwamadolo ngokudibana kunye nokwenzakala kwezicubu ezithambileyo, kunye nokuthintela isivumelwano.
6. Lungisa ukusetyenziswa emva kokususa udaka kwangethuba.
7.Unyango olusebenzayo lokugcina ukwenzakala kwe-ligament.
8. Ukuqhekeka okuzinzileyo.
9. Ukukhulula kunye nokulungiswa kwe-ligament ebukhali okanye enzima.
Ukubaluleka kokuqiniswa kwamadolo
Kwizigulana eziphila emva kotyando lwedolo, ixesha lokuchacha libaluleke kakhulu.
1. Kuthatha ixesha ukubuyela emva kotyando lwe-ligament, kunye neeveki ezi-6 ukuya kwezi-12 emva kotyando lelona qhagamshelo libuthathaka.
2. Izixhobo ezikhuselayo ezisebenzayo zixelela isigulana ukuba balugqibile utyando ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni, kodwa badinga ixesha lotshintsho ukuze babuyele kwimeko yesiqhelo yomzimba, kwaye ikwalunyango olusemagqabini lomzimba lokubuyisela ukusebenza ngokudibeneyo.
3. Izixhobo ezikhuselayo zingabenza baqiniseke nangakumbi ngokwasemphefumlweni ukuba baya kukhuseleka kakuhle nasemva kokuphuma esibhedlele
Ixesha Post: Jun-19-2021